I-Trendy Bright Flat w/ Balcony by Host Wise
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Host Wise
Phila njengomuntu wasendaweni enhliziyweni ye-PORTO!
Ukuthokoza igama elichaza kahle leli fulethi. Indawo enhle ephakathi nendawo, kuleli fulethi uzothola ithala kanye nesakhiwo se-attic, esizokuvumela ukuthi ube nesipiliyoni ongasoze wasikhohlwa ..
Ngokunethezeka kwakho engqondweni, ifulethi linesivinini esisheshayo i-WI-FI ne-NETFLIX.
BHEKA MANJE futhi ulungiselele izikhwama zakho ukuze uthole isipiliyoni ongasoze wasikhohlwa.
✩ "Ifulethi lisha, litholakala kahle futhi linesitayela esihle kakhulu. Ukungena bekulula kakhulu. Kukhona yonke into oyidingayo ekhishini nasendlini yangasese. I-inthanethi ishesha kakhulu. Isikhala esisesitezini sinokubuka kwedolobha. Ngiyakuncoma futhi bengizoyiqasha futhi. " Fernando✩
Jabulela leli fulethi elingaphansi kwe-attic kanye ne-minimalist. Ilungele ukuhlala kwakho ngenkathi uhlola idolobha lasePorto. Ngenxa yamafasitela ayo amakhulu, ifulethi lilula kakhulu futhi linomoya.
Kukho konke ukunethezeka kwakho, imibhede isakazwa emakamelweni ngale ndlela elandelayo:
→ Umbhede ophindwe kabili ekamelweni lokuqala;
→ QUEEN SIZE umbhede usofa egumbini lokuphumula
Yenza ukudla kwakho EMAKHISHI kukuhlomele kahle, unazo zonke izitsha nezinto zikagesi ozidingayo ukuze ulungiselele isikhathi esimnandi etafuleni, uzizwe sengathi usekhaya:
→ Umshini wekhofi;
Ngaphezu kwekhishi, ungathembela ku-BATHROOM ukuze uthole ukugeza okuphumuzayo ngemva kokuvakashela idolobha.
Sesikutshelile kakade mayelana ne-balcony / ithala elihle leli fulethi elikunikeza lona? Uzothola ithuba lokuphuza ingilazi yewayini lasePort ngenkathi ujabulela ilanga ledolobha futhi ujabulela umlando owatshelwa yizo zonke izakhiwo ezikuzungezile.
Ulindeni? Chitha lokhu OKUNGEZESIFUNDAZWE nathi!
4.74(39 okushiwo abanye)
I-Bonfim inazo zonke izinhlobo zezitolo eduze njengoba iqhele ngemizuzu nje ukusuka enkabeni. Isitolo esikhulu saseLidl sihamba ngomzuzu ongu-1 kanti isitolo esikhulu iPingo Doce siwuhambo lwemizuzu eyi-7.
Kukhona ikhofi namabhikawozi endaweni ukuze udle isidlo sasekuseni noma isidlo santambama.
Uzothola imigqomo kadoti eduze kwefulethi.
Ibungazwe ngu-Host Wise
Ngizohlala ngitholakala futhi ngizokunikeza amathiphu angcono kakhulu okuhlola idolobha futhi uthole amagugu afihliwe.
Ngihlale ngibheke ngabomvu ukusingatha abantu abakhulu. Ngithumeleleni i-imeyili manje futhi nizamukele ukuze nithole umuzwa omuhle kunawo wonke!
Ngihlale ngibheke ngabomvu ukusingatha abantu abak…
Inombolo yepholisi: 103479/AL